वाम गठबन्धनलाई जिताउन प्रगतिशील रुपान्तरणको अपिल - मूल्याङ्कन अनलाइन
वाम गठबन्धनलाई जिताउन प्रगतिशील रुपान्तरणको अपिल
मंसिर १०, काठमाडौं
प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनका संयोजक श्याम श्रेष्ठ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वामगठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई मत दिई जिताउन आमजनतालाई ‘प्रगतिशील रुपान्तरण’ संस्थाले अपिल गरेको छ ।
संस्थाले मंसिर ८ गते एक लिखित अपिल वक्तव्य प्रकाशित गर्दै भनेको छ, “ नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हाम्रो संघारमा आइपुगेको छ । चुनाव नेपालको बिग्रँदो स्थिति सुधार्ने अमूल्य अवसर हो । नियम कानुन बनाउने र शासन गर्ने ठाउँमा असल–स्वच्छ जनप्रतिनिधि र समाजवादी सोच बोकेको दल पुर्याउन सक्यौँभने यो स्थितिमा परिवर्तन सम्भव हुनसक्छ । परन्तु कुनै दलको भएपनि मजदुरमारा–गरिबमारा,भ्रष्ट–राष्ट्रघाती मानिसलाई भने कदापि मत नहाल्न हामी आम मतदातालाई सचेत बनाउन चाहन्छौं।
यो चुनावमा नेपालका विभिन्न वामपन्थी दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेका छन् । यसलाई पार्टी एकतासम्म लैजाने घोषणा पनि उनीहरूले गरेका छन् । वैज्ञानिक समाजवादी सोच राख्ने प्रगतिशील वौध्दिकहरूको साझा संस्था हुनुेको नाताले प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलनले यसलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।”
वाम गठबन्धनको पक्षमा मत माग्दै उक्त संस्था भन्छ, “अरूभन्दा प्रगतिशील/देशप्रेमी वा कम खराब हुनुका नाताले वामपन्थी गठवन्धनका उम्मेदवारलाई मत हाल्न हामी सम्पूर्ण मतदातालाई अपील गछौँ”
‘प्रगतिशील रुपान्तरण’द्वारा जारी अपिलको पूर्ण पाठ :
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ राजनीतिक क्रान्ति उथलपुथलकारी भयो तर त्यही उँचाइको आर्थिक र सांस्कृतिक क्रान्ति भने हुनसकेन । राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आउनु, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य ढलेर संघीयता आउनु, राज्यको पनि धर्म हुने स्थिति समाप्त भएर धर्मनिरपेक्ष राज्य आउनु, खालि एकथरिको मात्र राज्यका ठाउँमा धेरैथरि अट्ने समावेशी राज्य आउनु चान्चुने खालको फेरबदल होइन ।
यी सबै राजनीतिक परिवर्तनका वावजुद देशमा औद्योगिक र कृषि क्रान्ति हुन नसक्दा ३६ लाखभन्दा ज्यादा नेपाली युवायुवतीहरू अहिले कामको खोजमा भारतबाहेकका देशमा विदेशिन वाध्य भएका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले नै अहिले देश टिकेको छ । गरीखाने वर्ग, गाउँहरू र गरिबहरूकहाँ आर्थिक/सामाजिक परिवर्तनको उज्यालो पुग्नसकेको छैन । देशलाई बिभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर गराउने १८ वटा भन्दा ज्यादा उद्योगहरू नेपाली कांग्रेसको सरकारले कौडीको मोलमा बेचेको छ । निर्यात गर्ने वस्तु खास नहुँदा व्यापार घाटा यति धेरै चुलिएको छ कि हामी अहिले १ रू वरोवरीको वस्तु निर्यात गर्दा १३ः५० बरोवरीको वस्तु आयात गर्न पुग्छौँ, जुन दस बर्षअघिसम्म रु १ को निर्यात बरोबर रू २.८० को आयात थियो । सांस्कृतिक क्रान्ति हुन नसक्दा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र व्यक्तिवाद झन् नांगो रूपमा बढेको छ ।
यो स्थितिमा नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हाम्रो संघारमा आइपुगेको छ । चुनाव नेपालको बिग्रँदो स्थिति सुधार्ने अमूल्य अवसर हो । नियम कानुन बनाउने र शासन गर्ने ठाउँमा असल–स्वच्छ जनप्रतिनिधि र समाजवादी सोच बोकेको दल पुर्याउन सक्यौँ भने यो स्थितिमा परिवर्तन सम्भव हुनसक्छ । परन्तु कुनै दलको भएपनि मजदुरमारा–गरिबमारा,भ्रष्ट–राष्ट्रघाती मानिसलाई भने कदापि मत नहाल्न हामी आम मतदातालाई सचेत बनाउन चाहन्छौं ।
यो चुनावमा नेपालका विभिन्न वामपन्थी दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेका छन् । यसलाई पार्टी एकतासम्म लैजाने घोषणा पनि उनीहरूले गरेका छन् । वैज्ञानिक समाजवादी सोच राख्ने प्रगतिशील वौध्दिकहरूको साझा संस्था हुनुको नाताले प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलनले यसलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
परन्तु हाम्रो आलोचनात्मक मत यो रहेको छ कि वामपन्थी गठबन्धनको उम्मेदवार स्वच्छ र समुदायकेन्द्री चरित्रको हुनुपर्छ । वाम गठवन्धनको हरेक क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम समाजवादी विचार र समुदायमुखी चरित्रले ओतप्रोत हुनुुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्र र उदारवादले वकालत गरेजस्तो असमतामूलक असमावेशी समृध्दि नेपालको आवश्यकता होइन । नेपालको आवश्यकता त समाजवादी चरित्रको समतामूलक समावेशी समृृध्दि हो अनि विकासको प्रतिफलको न्यायपुर्ण वितरण हो । यति हजार उति हजार मेगावाट विजुली होइन, निश्चित समयसीमाभित्र सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरण/सडकीकरण गर्दै नेपालमा औद्योगिक र कृषि क्रान्ति सम्पन्न गरेर देशभित्रै रोजगारीको अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गर्ने, सम्पत्तिको प्रगतिशील वितरण गर्ने, प्रगतिशील सम्पत्ति कर लाउने र यसरी मुलुकलाई समाजवादी समृध्दिको बाटोमा लैजाने वस्तुवादी प्रगतिशील सामाजिक रूपान्तरणको मार्गचित्र वाम गठवन्धनको नीति र कार्यक्रममा आउनसक्नुपर्छ । यी कुरामा गठवन्धनको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा गएको दस बर्षमा हामी दसवटा सरकार फेर्यौं । अतः वामपन्थी गठवन्धनमा रहेका दलबाट नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्नका लागि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारिणीको एजेण्डा यही चुनावमा आउनु आवश्यक छ । देशको वर्गीय तथा सामाजिक बनावटको रंगजस्तो छ राज्यको रंग उस्तै बनाए मात्र त्यो समाजवादी चरित्रको सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुन्छ । अतः देशको शासन–प्रशासनमा र हरेक तहको नीति–नियम र कानुन निर्माणमा मजदुर र गरिब किसानको, महिला र दलितको, जनजाति र मधेशी लगायत नेपालका सबै अल्पसंख्यक र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधिलाई न्यायोचित संख्यामा पुर्याउने कार्यक्रम आउनुपर्छ । यी कुरामा पनि गठवन्धनको घोषणापत्रमा अभाव खट्किन्छ ।
यी सबै कमजोरी र सीमाका वावजुद तल दिइएका कारणले अरूभन्दा प्रगतिशील/देशप्रेमी वा कम खराब हुनुका नाताले वामपन्थी गठवन्धनका उम्मेदवारलाई मत हाल्न हामी सम्पूर्ण मतदातालाई अपील गर्छौं।
वामपन्थी गठवन्धनलाई नै तपाईंको मत किन ?
यी प्रश्न पढ्नुहोस्, घोत्लिनुहोस् र आफै निर्णय गर्नुहोस् तपार्इंको अमूल्य मत कसलाई दिने ?
♦ भारतले नाकावन्दी लगाएको बेला कसको सरकार त्यसकाविरूध्द दरोसित उभियो र नाकावन्दी समाप्त पार्न भारतलाई वाध्य पार्यो?
♦ नेपालमा अठार घण्टा लामो अन्धकारमय लोडशेडिङ समाप्त पार्ने जनमुखी काम कुन सरकारले गर्यो ?
♦ ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रममार्फत गाउँमा सिधै बजेट पुर्याउने महत्वपूर्ण कार्य कुन सरकारले थाल्यो?
♦ नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बृध्द भत्ता दिने कामको थालनी कुन सरकारले गर्यो ?
♦ भारतबाहेकको वैकल्पिक पारवहन मार्गका लागि चीनसित ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न गर्ने कार्य कुन सरकारले गर्यो ?
♦ हरेक नेपालीलाई राज्यको खर्चमा खानेकुरा, वास र रोजगारी पाउने हक, नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य उपचार पाउने हक नयाँ संविधानमा कसको मुख्य जोड र पहलमा पर्न गएको हो?
♦ नेपालका भविष्य खुल्ने गरी चीनसितको वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभमा कुन सरकारले हस्ताक्षर गर्यो?
♦ सन् १९५० को सन्धि, हरेक बर्ष नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने कोशी तथा गण्डक सम्झौता लगायत अरू सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता समाप्त हुनुपर्छ भनेर लगातार संघर्ष गर्ने शक्ति कुन हो?
♦ राजतन्त्रकोे तानाशाहीबाट नेपाललाई आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ डोर्याउने काम कसले गर्यो?
♦ जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००६ सालदेखिको सपनालाई वास्तविक विपनामा बदल्नका लागि मुख्य भूमिका पछिल्लो समयमा कसले खेल्यो?
♦ नेपाली राजनीतिमा समावेशीताको एजेण्डा कसले स्थापित गर्यो ?
♦ पहिले ७ प्रतिशत मात्र महिला रहेको नेपाली संसदमा अहिले २९.५ प्रतिशत महिला पुग्ने स्थिति कसको समावेशी एजेण्डाका कारण बन्यो ?
♦ संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्यबाट ७ प्रतिशतमा उकाल्ने ऐतिहासिक समावेशी एजेण्डाको मुख्य थालनीकर्ता कुन दल थियो ?
♦ राज्यको आँखामा सबै धर्म बरोवर भन्ने धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा नेपालमा कसको कारण स्थापित भयो ?
निश्चय नै यी सबै गौरवयोग्य कार्य नेपालका वामपन्थी दल वा तिनका सरकारले नै गरेका हुन् । यदि यस्ता कार्यले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईको अमूल्य मत प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतिर वामपन्थी गठवन्धनका तिनै दललाई जानु सबैभन्दा बेस हुनेछ, जसले तपाईको क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएका छन् ।
मंसिर ८, २०७४ प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलन , नेपाल
« नगद १ लाख सहित ५ जना नयाँ शक्तिका कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा (Previous News)
(Next News) मतदान शुरु, चिसो बिहानीमै मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिता »